मन्त्रिपरिषद् बैठक: सिनेमा हल र जिम बन्द गर्ने निर्णय ! – Online Kendra
२ माघ २०७८, आईतवार १८:११ OnlineKendra
माघ २,काठमाडौँ । कोरोना महामारीको तेस्रो लहर फैलदै गएपछि सरकारले सिनेमा हल र जिम बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । पुस ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले माघ १५ गतेसम्म सिनेमा हल र जिम बन्न हुने बताएका हुन्।
कोरोना संक्रमण बढ्दै गएपछि सार्वजनिक स्थलमा भीडभाड कम गर्न मनोरञ्जन क्षेत्रलाई माघ १५ गतेसम्म बन्द गर्ने निर्णय भएको उनले जानकारी दिए । त्यसैगरी मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीच प्राकृतिक स्रोत बाँडफाड गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । प्रवक्ता कार्कीका अनुसार विभिन्न विद्युत आयोजनाको क्षतिपूर्ति निर्धाणका निम्ति समिति गठन गर्ने निर्णयसमेत सरकारले गरेको छ ।
नयाँ भेरियन्ट कोभिड महामारकिो तेस्रो लहर रोकथाम तथा नियन्त्रण सम्बन्धी ओदश, २०७९ जारी निर्णय गरेको छ ।
Top Headline, मनोरन्जन, राजनीतिमन्त्रिपरिषद् बैठक: सिनेमा हल र जिम बन्द गर्ने निर्णय !
लिपुलेक मुद्धामा सरकार बोल्यो : एकपक्षीय सडक निर्माण र विस्तार रोक !